Emily Dickinson: uri nke ndụ n'onwe ya | Akwụkwọ akụkọ
Emily Dickinson: abụ
Emily Dickinson kwuru
Emily Dickinson (1830-1886) bụ onye America na-ede uri a na-ewere dị ka otu n'ime ndị nnọchi anya kacha mkpa nke ụdị edemede a n'ụwa niile. Mgbe ọ dị ndụ, mmadụ ole na ole maara banyere nkà ya dị ka onye edemede, nanị ezinụlọ na ezigbo ndị enyi. Mgbe ọ nwụsịrị na nchọpụta nke nwanne ya nwanyị ihe odide ya, mbipụta nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 1800 uri malitere.
N'oge na-adịghị anya, Emily Dickinson si na amaghị aha wee bụrụ onye dị mkpa na ụwa uri. Akwụkwọ ozi ya na uri ya bụ ngosipụta nke ịdị adị yaHa nwere akụkọ banyere ịhụnanya ya, ọbụbụenyi ya, nke ọtụtụ ọnọdụ dị iche iche o biri ndụ. Na nhazi na mgbasa nke ihe nketa uri ya, Lavinia Dickinson pụtara, Mabel Loomis Todd, Thomas Higginson, Martha Dickinson Bianchi na Thomas H. Johnson.
1 Egwu nke Emily Dickinson
1.1 Mgbe m gụrụ mkpụrụ
1.2 Enwere m ike ịnọ naanị m na-enweghị owu ọmụma m ...
1.6 Na m hụrụ n'anya mgbe niile
2 Ozi dị mkpirikpi gbasara onye odee, Emily Dickinson
2.1 Ọmụmụ na mbido
2.3 Ọmụmụ ihe etinyere
2.4 Ụmụ agwa dị mkpa maka Dickinson
3 Ederede Dickinson
3.1 Ihe omumu
4 Mbipụta nke uri Dickinson
4.1 Abụ e bipụtara na ndụ
4.2 Abụ (1890)
4.3 Akwụkwọ ozi sitere na Emily Dickinson (1894)
4.5 Bolts of Melody: New Poems nke Emily Dickinson (1945)
4.6 Abụ nke Emily Dickinson (1945)
Egwu nke Emily Dickinson
Mgbe m gụrụ mkpụrụ
ẹsuande n'ebe ahụ
na-eto eto dị ka nke a, n'akụkụ n'akụkụ;
mgbe m na-enyocha ndị mmadụ
ole ka ọ na-agha ụgha
ka ọ dị elu;
mgbe m chere ubi
na ndị mmadụ agaghị ahụ
ohere na-aghọrọ mkpụrụ akụ ya
ma tufuo anu a,
Enwere m ike ime na-enweghị oge okpomọkụ, na-enweghị mkpesa.
Bee anụ ahụ - ị ga-ahụ egwu ahụ -
bọlbụ mgbe bọlbụ, na-asa na ọlaọcha,
dị nnọọ ezigara n'ụtụtụ okpomọkụ
dobere gi nti mgbe lute ochie.
Enwere m ike ịnọ naanị m na-enweghị owu ọmụma m ...
Enwere m ike ịnọ naanị m ma ọ bụrụ na owu adịghị m
Ejila m akara aka m mara nke ọma
eleghi anya udo nke ozo,
nwere ike ịkwụsị ọchịchịrị
Ma jupụta obere ụlọ
dị obere na nha
inwe sacrament ya,
Anaghị m enwe olileanya
nwere ike ịbata n'ọnụ gị dị ụtọ,
mebie ebe e nyere iwu maka nhụjuanya,
ọ ga-adị mfe ịla n'iyi na ụwa n'anya;
karia imeri peninsula blue m,
jiri obi ụtọ laa n'iyi.
Ahụtụbeghị m ala tọgbọrọ nkịtị
Oké osimiri ahụghịkwa m anya
mana ahuru m anya anya heather
Amakwaara m ihe ebili mmiri ahụ ga-abụ
Mụ na Chineke ekwughị okwu
emeheghịkwa m ileta ya n’eluigwe,
mana ejiri m n'aka ebe m na-eme njem
dị ka a ga-asị na ha nyere m usoro ahụ.
A na-amụta mmiri site na akpịrị ịkpọ nkụ.
Ụwa - site na oké osimiri gafere.
Ecstasy - maka nhụjuanya -
La Paz - agha na-agwa ya -
Ịhụnanya, site na oghere nke ebe nchekwa.
Nnụnụ, maka Snow.
Ọ bụrụ na obi ike ahapụ gị -
Na-ebi n'elu Ya-
Mgbe ụfọdụ ọ na-adabere n'ili.
Ọ bụrụ na ị na-atụ egwu imebi -
Ọ bụ ọnọdụ nchekwa -
Ọ dịghị mgbe ihe ọjọọ
N'aka ndị ahụ nke Bronze-
Ọ bụghị nke kacha mma nke Giants -
Ọ bụrụ na mkpụrụ obi gị ama jijiji -
Mepee ọnụ ụzọ anụ ahụ—
Onye ụjọ chọrọ oxygen -
Ọ dịghị ihe ọzọ-
Na m hụrụ n'anya mgbe niile
Ana m ewetara gị ihe akaebe
na ruo mgbe m hụrụ n'anya
Anaghị m ebi ndụ - ogologo oge -
na m ga-ahụ n'anya mgbe niile
M ga-atụle ya
gịnị bụ ịhụnanya
na ndu ebighi-ebi
nke a - ọ bụrụ na ị na-enwe obi abụọ - ezigbo,
ya mere enweghi m
ihe ọ bụla iji gosi
ma e wezụga calvari
Ozi dị mkpirikpi gbasara onye odee, Emily Dickinson
Ọmụmụ na mbido
Emily Elizabeth Dickinson A mụrụ ya na Disemba 10, 1830 na Amherst, Massachusetts. Ndị mụrụ ya bụ Edward Dickinson - onye ọka iwu ama ama - na Emily Norcross Dickinson. Na New England Ezinụlọ ya nwetara aha na nkwanye ùgwù dịka ndị nna nna ya bụ ndị ama ama ndị nkuzi, ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ndị ọka iwu.
Eserese ikpeazụ nke Emily Dickinson
Ma nna nna ya—Samuel Fowler Dickinson—na nna ya mere ndụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị na Massachusetts. Nke mbụ bụ onye ọka ikpe Hampton County afọ iri anọ, nke ikpeazụ bụ onye nnọchi anya steeti na Senator. Na 1821, ha abụọ tọrọ ntọala ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ Amherst nkeonwe.
Emily bụ ada nke abụọ nke di na nwunye Dickinson; nke mbụ bụ Austin, onye a mụrụ na 1829. The nwa okorobịa nwetara akwụkwọ na Amherst College wee gụchaa na Mahadum Harvard dị ka ọkàiwu. N'afọ 1956, Austin lụrụ enyi nwanne ya nwanyị, Susan Huntington Gilbert. Nke ikpeazụ fọdụrụ ezigbo nso Emily, Ọ bụ onye ntụkwasị obi gị na muse nke ọtụtụ n'ime ya uri.
Na 1833 a mụrụ nke ọdụdụ ada nke Dickinson di na nwunye, Lavinia -Vinnie-, Onye enyi Emily kwesịrị ntụkwasị obi n'oge ndụ ya niile. Ekele dịrị Vinnie - onye na-amasị nwanne ya nwanyị - anyị nwere ozi nkenke gbasara onye edemede ahụ. N'ezie, ọ bụ Lavinia nyeere Emily aka ịnọgide na-ebi ndụ nke ịnọpụ iche na ịnọrọ onwe ya, ọ bụkwa otu n'ime mmadụ ole na ole maara ọrụ uri ya n'oge ahụ.
Ọmụmụ ihe etinyere
Na 1838, Amherst College -Nke bụ naanị maka ụmụ nwoke - kwere ka ndebanye aha ụmụ nwanyị na ụlọ ọrụ ahụ. Ọ dị ka nke a Emily banyere, afọ abụọ mgbe e mesịrị, ka kwuru center, ebe nwetara ọzụzụ zuru oke. N'ime akụkụ mmụta, ọ gara nke ọma na akwụkwọ, akụkọ ihe mere eme, geology na bayoloji, ebe mgbakọ na mwepụ na-esiri ya ike.
N'otu aka ahụ, na ụlọ akwụkwọ a, ọ mụtara ọtụtụ asụsụ, n'etiti Greek na Latin pụtara, asụsụ ndị nyere ya ohere ịgụ akwụkwọ ndị dị mkpa n'asụsụ mbụ. Na nkwanye nke nna ya, ọ na-amụ German na rector nke ụlọ akwụkwọ mmuta. Dị ka ihe omume extracurricular, ọ nwetara nkuzi piano na nwanne nne ya, na mgbakwunye na ịbụ abụ, ugbo, floriculture na ubi. Azụmahịa ikpeazụ ndị a batara n'ime ya nke ukwuu nke na ọ na-eme ha n'oge ndụ ya niile.
Ụmụ agwa dị mkpa maka Dickinson
N'ime ndụ ya niile, Dickinson zutere ndị mere ka ọ mara ịgụ ihe, si otú a na-akara ya akara nke ọma. N'etiti ha Onye ndụmọdụ ya na enyi ya Thomas Wentworth Higginson pụtara, BF Newton na Reverend Charles Wadsworth. Ha niile nwere mmekọrịta chiri anya na onye na-ede uri, na ọtụtụ n'ime akwụkwọ ozi ya a ma ama - ebe o gosipụtara ahụmahụ ya na ọnọdụ ya - ka e degaara ha.
Site na foto na-adịghị ala ala nke ọrịa akụrụ (nephritis, dị ka ndị ọkachamara si kwuo) na mgbe ịda mbà n'obi sitere na ọnwụ nke nwa nwanne ya nke ọdụdụ, onye na-ede uri nwụrụ na Mee 15, 1886.
Dickinson dere maka ihe ọ maara na ihe ndị na-ewute ya, na, dị ka atụmatụ ahụ si dị, ọ gbakwunyere mmetụ nke ọchị ma ọ bụ ihe ọchị. N'ime isiokwu ndị dị n'abụ ya bụ: ọdịdị, ịhụnanya, njirimara, ọnwụ na anwụghị anwụ.
Dickinson dee ọtụtụ abụ nkenke na otu ọkà okwu, na-ezo aka na "M" (ọ bụghị mgbe niile onye edemede) mgbe niile na onye mbụ. N'okwu a, o kwuru: "Mgbe m na-ekwupụta onwe m, dị ka onye nnọchiteanya nke amaokwu ahụ, ọ pụtaghị m, kama ọ bụ onye a na-eche" (L268). N'otu aka ahụ, ole na ole n'ime ọrụ ya nwere aha; Mgbe e dezichara ya, a na-eji ahịrị ma ọ bụ ọnụọgụ mbụ mata ụfọdụ.
Mbipụta nke uri Dickinson
Abụ e bipụtara na ndụ
Mgbe onye na-ede uri ka dị ndụ, ọ bụ nanị ole na ole n’ime ihe odide ya pụtara ìhè. E bipụtara ụfọdụ n’ime ha n’akwụkwọ akụkọ obodo Springfield Daily Republican, Samuel Bowles duziri. Ọ ka amabeghị ma Dickinson nyere ikike maka ngosi ya; n'ime ha bụ:
"Sic transit gloria mundi" (February 20, 1852) nwere aha "A Valentine"
"Ọ dịghị onye maara obere rose a" (August 2, 1858) na aha "N'ihi na nwanyị, na rose"
“Agbalịrị m mmanya a na-emetụbeghị” (May 4, 1861) nke nwere aha “The May-Wine”
"Nchekwa na Ụlọ Alabaster ha" (March 1, 1862) nwere aha "Ụra ụra"
Site na akwụkwọ ndị e mere na Springfield Daily Republican, otu n’ime ihe ndị kasị dị ịrịba ama bụ “Onye enyi ya na ahịhịa ndụ”—na February 14, 1866—. A na-ewerezi ihe odide a ka ọ bụrụ ọkachamara. Agbanyeghị, nke a enweghị ikike nke onye na-ede uri maka ikpughe ya. E boro ya ebubo na onye ọ tụkwasịrị obi napụtara ya n'enweghị ikike, a na-echekwa na ọ bụ Susan Gilbert.
Emily Dickinson na Kate Scott Turner (foto 1859)
Mgbe Lavinia chọpụtara ọtụtụ narị uri nwanne ya nwanyị, o kpebiri ibipụta ha. Maka nke a, Mabel Loomis Todd chọrọ enyemaka, onye na-ahụ maka idezi ihe yana TW Higginson. Ihe odide ndị ahụ nwere mgbanwe dị iche iche, dị ka ntinye aha, itinye akara edemede na mgbe ụfọdụ, a na-emetụta okwu iji nye nkọwa ma ọ bụ ukwe.
Mgbe ihe ịga nke ọma nke mbụ nhọrọ a, Todd na Higginson bipụtara akụkọ ifo abụọ ọzọ nwere otu aha na 1891 na 1896..
Akwụkwọ ozi Emily Dickinson (1894)
Ọ bụ nchịkọta akụkọ nke onye na-ede uri—maka ezinụlọ na ndị enyi. Mabel Loomis Todd deziri ọrụ a site n'enyemaka nke Lavinia Dickinson. Ọrụ a nwere mpịakọta abụọ nwere mkpụrụedemede ahọpụtara nke gosipụtara ma akụkụ nwanne na ịhụnanya nke onye na-ede uri.
The Single Hound: Poems of a Lifetime (The Hound naanị: uri nke ndụ, 1914)
Ọ bụ mbipụta mbụ n'ime otu mkpokọta uri isii nke nwa nwanne ya bụ Martha Dickinson Bianchi deziri. O kpebiri ịga n'ihu na ihe nketa nwanne mama ya, n'ihi nke a, o ji ihe odide ndị o ketara n'aka Lavinia na Susan Dickinson mee ihe. E ji aghụghọ mee mbipụta ndị a, na-agbanweghị ukwe na-akọwapụtaghị abụ ndị ahụ, ya mere, ha dị nso na ndị mbụ.
Mkpokọta ndị ọzọ nke Martha Dickinson Bianchi bụ:
Ndụ na akwụkwọ ozi nke Emily Dickinson (1924)
Abụ zuru ezu nke Emily Dickinson (1924)
Abụ ndị ọzọ nke Emily Dickinson (1929)
Abụ nke Emily Dickinson: mbipụta narị afọ (1930)
Abụ nke Emily Dickinson ebipụtaghị (1935)
Bolts of Melody: New Poems nke Emily Dickinson1945)
Mgbe ọtụtụ iri afọ nke mbipụta ikpeazụ ya gasịrị, Mabel Loomis Todd kpebiri idezi uri ndị ka dị na Dickinson.. Ọ malitere ọrụ a site n'ọrụ Bianchi rụrụ. Iji mee nke a, o nwetara nkwado nke nwa ya nwanyị Millicent. Ọ bụ ezie na ọ dị mwute na ọ dịrịghị ndụ ịhụ ka e mezuru ihe mgbaru ọsọ ya, onye nketa ya mechara ya ma bipụta ya na 1945.
Abụ nke Emily Dickinson (1945)
Onye ode akwụkwọ Thomas H. Johnson deziri ha nwere uri niile pụtara ìhè n'oge ahụ. N'okwu a, onye nchịkọta akụkọ na-arụ ọrụ ozugbo na ihe odide mbụ, na-eji nkenke na nlekọta pụrụ iche. Mgbe ọ rụsịrị ọrụ ike, o nyere iwu nke ọ bụla n'ime ihe odide ahụ n'usoro n'usoro oge. Ọ bụ ezie na ọ dịghị nke ọ bụla e depụtara ụbọchị, ọ dabeere na mgbanwe ndị odee mere na ide.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » ọtụtụ » Emily Dickinson: abụ
Saturnino Calleja, akụkọ ya na ndị ọzọ
Roberto Lapid. Ajụjụ ọnụ onye ode akwụkwọ Pasión imperfecta